Restaurant Best Yurub Michelinguiden Guide | Save A tareenka
Guriga > safarka Europe > Restaurant Best Yurub Michelinguiden Guide
(La Cusbooneysii Ugu Dambeeyay: 18/03/2022)
makhaayad Yurub guide Michelinguiden Best bixisaa bilowga weyn oo qorsheyneysa safar tareen Yurub a. guide Michelinguiden hadda dalabyo safra Yurub xulashada ah makhaayadaha iyo hudheelada gudaha 38 magaalooyinka Yurub. Saddex magaalo cusub ayaa lagu daray in this 2019 daabacaad: Zagreb iyo Dubrovnik, Croatia, iyo Reykjavik, Iceland. Anonymous tababaray kormeerayaasha si ay u booqdaan dooro maqaayado halka codsanaya damaashaaday ah Michelinguiden nidaamka cuntada star-rating oo ay isticmaalaan nidaamka la mid ah hoteelada. Natiijada: kala duwan oo ka mid ah shirkadaha ku talinayaa dhammaan dhadhankii iyo miisaaniyadda.
Socotada dareemi kartaa kalsooni ku tiirsan on Michelinguiden hanuunin sameeyaan safarka tareenka in kale oo badan delicious! Waxaan hoos ugu cidhiidhi ah hudheelka ugu wanaagsan Yurub guide Michelinguiden, iyo dabcan, hubiyey in joogsi kastaa si fudud u yahay la heli karo by tareenka!
hudheelka ugu wanaagsan Yurub Michelinguiden Guide: Talyaaniga
Italy waxay caan ku tahay darsaday weyn ay u Caalamka of farshaxanka, naqshadaha, moodada, opera, suugaanta, naqshadeynta, oo film - liiska on tagaa, oo maba aannu soo sheegnay ku darsadeen in ay goobta makhaayad Yurub Best.
news weyn ee 2019 waa in Italy ay leedahay makhaayad three-star cusub, abaalmarinta ugu sareysa ee Michelinguiden!
Uliassi, oo ku yaalla Senigallia xeebta Italy ee Adriya, ugu dambayntiina waxay leedahay saddex xiddigood oo in badan la sugayey ka dib markii ay sannado badan ku qaadatay heerka labada xiddig.
Sida laga soo xigtay barta makhaayada Lovers cuntada Fine. Orod by walaashay iyo kooxda walaalkiis Catia iyo Mauro Uliassi, makhaayadda dhigeysa diiradda culus on badda iyo bixisaa labada bedeley dhadhankiisu iyo cuntada ah oo la carte. Uliassi hadda waa mid ka mid ah sagaal kale three-star makhaayadaha ee Italy. Taas macnaheedu waa in dhammaan sannadkii hore three-star meelaha hayo xaaladooda, oo ay ku jiraan maqaayadda Modena ee caanka ah Osteria Francescana.
Rimini in Tareenadu Senigallia
Rome si ay Tareenadu Senigallia
Tareenadu si Ancona Senigallia
Florence si Tareenadu Senigallia
Hadda waxaa jira 367 xiddig makhaayad Best Yurub Michelinguiden, up ka 356 sanadkii la soo dhaafay.
Ma jirin wax cusub maqaayado laba-star liiska sanadkan. Hagaha sameeyo waxaa ka mid ah shir sanadeedkii a 29 cusub maqaayado hal-star ka badan laba darsin degmooyinka Talyaani. Tani waxay keenaysaa in tirada guud ka dhigaysa 318. Guud ahaan, Tilmaamo hagaha 367 maqaayado xiddig, up ka 356 sanadkii la soo dhaafay.
hudheelka ugu wanaagsan Yurub Michelinguiden Guide: Boqortooyada Ingiriiska
Loogu magac daray "ka Oscar ee warshadaha cuntada" xafladii abaalmarinta ee Waterloo ee shineemo IMAX BFI waa highlight a for cunto kariyayaal ka guud ahaan dalka.
Sanadkan, makhaayadda Best Yurub ee Great Britain ku hadhay aanay isbeddelin shan maqaayado barashada waxay ku guulaysteen inay hayn xiddigaha ay. Guux qorista ee gargaarka! Araki The, Restaurant Gordon Ramsay oo Alain Ducasse ee Dorchester waxay ahaayeen goobaha London si uu u qabto on abaalmarino ay, sidii Heston Blumenthal ee Fat Duck oo Alain Roux ayaa Wabiga Inn, labadaba Bray.
Waxaa jira badan oo tareenada madax for London waqtiyo kala duwan ee guud ahaan Yurub. Head in Badbaadinta roobka si aad u ballansato tigidh daqiiqado gudahood si aad u ogaato geedka ugu fiican!
Guide Michelinguiden The 2019 liiska buuxa
Alain Ducasse ee Dorchester The
Makhaayadda Gordon Ramsay
hudheelka ugu wanaagsan Yurub Michelinguiden Guide: Nederlaan
Netherlands ayaa (ama Holland) waa dal yar oo ay ka buuxaan astaamo adduunka caan ka ah. beeraha rabarka Beautiful, Falkenberg, farmaajo suuqyada, alwaax kabaha, kanaalada ee Amsterdam, masterpieces ee Old Masters, Delft Blue dhoobada, Hal abuur biyaha-maaraynta, iyo malaayiin baaskiilada. Oo baaskiilada ku mahad wanaag. The 2019 Hagaha MICHELIN ee Nederland wuxuu leeyahay wadar ahaan 571 maqaayado iyo 263 hoteelada. Aad ku socoto in ay u baahan tahay tababarka.
Sanadkan xulashada kasoo muuqday laba cusub maqaayado laba-xiddigo leh iyo 12 goobaha la helo mid ka mid ah xiddiga markii ugu horeysay.
Hadda waxaa jira 89 maqaayado hal xiddigta leh ee total. Derozario oo ku taal Helmond, Jermain De Rozario saarata Lataliyihii gaarka ah ee cunnada ay Indonesian. at makhaayad Boqortooyada Tilburg, Paul Kappe sasabto cashooyin oo uu cunnada casri ah oo ay weheliso dhadhan aad u daran, sida Jeroen Brouwer at Loohoeve ah in Schoonloo iyo Thomas Van Santvoort at gabadh Kerkdriel. Xooggii uu u dhadhan sidoo kale waa waxa lagu tilmaamay inventiveness ah la geeyay by Jim iyo Mike Cornelissen at Aragtida Rhine Doornenburg, waana taxadir ah ee suxuunta bixiyo OONIVOO Uden. Waayo, kuwii ku caashaqi jiray oo cunto ku wanaagsan raaxada xeeran, Bougainville Amsterdam, iyo Voltaire in Leersum yihiin musts buuxda.
Saldhigga dhexe ee Amsterdam waa xarunta tareenka ugu weyn waana wadnaha dhabta ah ee magaalada: dhexe ee ma aha oo kaliya by magaca, laakiin sidoo kale sida ugu weyn gaadiidka dadweynaha meel kala iibsiga, sidaa darteed waxa ay noqon doontaa meel fiican oo tareen sidoo kale.
hudheelka ugu wanaagsan Yurub Michelinguiden Guide: Isbayn
Madrid waa caasimadda ah ee Isbayn iyo ugu weyn degmada labada Bulshada Madrid iyo Spain oo dhan.
Madrid waa iiddii dhaqanka. Waxa uu ahaa wadnaha ee 1920. Booqday by Halyeeygii suugaanta sida Ernest Hemingway iyo Fitzgeralds ah, F Scott iyo Zelda, kuwo kale.
Waxay leedahay a goobta suuqa cuntada lagu jeclaado, laakiin makhaayadaha Michelinguiden Star ahayn kuwo si midkood seegi!
Ka hor inta aadan u jiheysan mid koowaad, waxaan kuu soo jeedinaynaa aad fiidkii bilaabi off la cocktails ka bar Museo Chicote broody. Meeshu waa mid ka mid ah miyuuna u Hemingway iyo halkan waxaad ka heli cabitaanka uu ugu jecel yahay, iyo darsin dhowr kale ee aad u badan tahay in aan isku dayay. waxaa madax hore ka hor dadkii badnaa qaado.
Madrid ku dhawaad 3,100 maqaayado, laakiin kuwo yar baa la doortay ayaa loo dhigay xiddigaha by caan ah Michelinguiden Guide. Waxaa jira 16 maqaayado in Madrid abaal xiddigaha Michelinguiden: DiverXO (saddex xiddigood); Santceloni, Terrace Casino The, Sergio Arola, Ramon Freixa Madrid iyo El Club Allard (laba xiddigood); iyo Kabuki, Kabuki Wellington, DSTAgE, Albora, Ri iyo Punto MX (mid ka mid ah xiddiga). Intaa waxaa dheer, duleedka magaalada, hal makhaayad (qolof) waxay leedahay laba xiddigood iyo waxaa jira saddex maqaayado hal-star: Casa Jose, Chiron, iyo Montia. Dhamaan iyaga ka mid ah u adeega cuntada heer caalami ah waxayna bixiyaan adeegyo aad u fiican.
Our top Michelinguiden xiddiga xulashada makhaayad magaalada Madrid waa DiverXO (3 xiddigaha heer sare ah!)
The curiyay ee Kariyaha David Muñoz leeyihiin hudheellada wacdaro dunida oo dhan. Naaray, geesinnimo, iyo hal-abuurnimadu waa furaha guusha DiverXO. menu maqaayadan ay isu bedesho iyadoo xilli ciyaareedkan, laakiin kaliya waxay leedahay laba fursadaha. Menu XOW iyo Menu Glotón XOW. Labadaba menusku waxay bixiyaan cunto isku mid ah waxayna ku kala duwan yihiin tirada iyo qiimaha.
Helitaanka jira: Habka ugu fiican ee si aad u hesho in ay qaado this of makhaayad Best Yurub waa by Metro ka dibna qaadan off in Tetuan Station (Khadka 1).
Ma doonaysaa in aad ogaato sida ugu fiican ee si aad u hesho in mid ka mid ah meelahan in Europe tareen? Save A tareenka Dabcan! Madax ka badan in our website in la helo qiimaha ugu fiican, in ilbiriqsi!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-restaurant-michelin%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#michelin	#Michelinstar	#dhul -biyoodyada	Cuntada	safarka Ingiriiska	dalxiiska	safar ahaan	safarada	xanuunka safarka
Tegay Disability A In Europe sameeyey Easy